I-China inkunkuma enkulu yokuphinda isetyenziselwe ukuvelisa kwakhona kunye neFektri | UKUQINISEKISA
Iglasi evuthelwa ngesandla, icwecwe kwaye kulula ukuyiphatha, ikuzisela lula.
• Ukuphakama 35cm
Yintoni i-Recycler Bong?
Iminyaka eliqela, iirisayikilisha zithathe umhlaba wokutshaya ngoqhwithela ngomsebenzi wokuyila kunye nolwakhiwo lwebong ngokwayo. Ezi bongs zisebenzisa inkqubo yamagumbi amabini kunye netyhubhu yokungena yokuhambisa amanzi aqulathe umphunga phezulu kwisiqwenga ngaphambi kokuphinda usetyenziswe kwakhona. Izinto zokurisayikilisha aziboneleli kuphela abasebenzisi ngokutyibilika kokuhluzwa kwamanzi kwi-inhalations yabo, kodwa yenze ngendlela epholisa umphunga ngokufanelekileyo. Abasebenzisi abaninzi ngoku bakhetha ukuphinda basebenze kwakhona ngaphezulu kwayo nayiphi na enye i-bong yeepropathi zokucoca ezongezelelweyo. Isirhubulu esetyenzisiweyo sibuyele ngokugqibeleleyo kubaqalayo kunye nakumagqala afana nalawo ngenxa yeentsimbi zayo ezingenakuthelekiswa nanto kunye nemisebenzi eyahlukeneyo.
Usebenza njani u-Recycler Bongs?
Ezi bongs zincinci zincinci zisebenza ngokugcwalisa isiseko ngamanzi kwaye ulayishe iimpahla zakho kwisiseko okanye isikhonkwane, nje ukuba uphume, umsi uya kuhamba ngendlela esezantsi kwigumbi lesiseko apho liya kudibana khona namanzi okucoca ulwelo, emva koko unyuke udlule isiqu sokungena kwigumbi lesibini apho umphunga ukhutshwa kufutshane nomlomo njengoko amanzi ebuyela umva kwigumbi lesiseko ukuze iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isebenze kwakhona. Inkqubo ngokwayo iyonwabisa ukubukela (jonga ividiyo elapha ngasentla), kwaye ungayibukela yonke iyehla ngeglasi ecwebezelayo ecwebezelayo, intle kakhulu ukubukela. Amanzi aqukethe umphunga aqhubekeka nge-recycler bong amaxesha amaninzi njengoko ufuna, okanye ude ube ukulungele ukuthatha umsi omnandi, nencasa yomsi. Izinto zokurisayikilisha ziphantse zihlala zibandakanya i-percolators kwisiseko senkqubo esezantsi yokwenza ucoco lube ngcono ngakumbi. Zininzi iintlobo zeepercolator kwintengiso namhlanje ezinikezela ngeenkqubo ezahlukeneyo zokucoca ulwelo onokukhetha kuzo.
Kutheni i-Recycler Bong igqibelele kuwe？
Ngaphandle kokubonelela ngokubetha okubushelelezi, iirisayikilisha zigqibelele ngeendlela ezininzi. Uninzi lwezinto zokurisayikilisha zakhiwe ngamagumbi amabini ukuze ungaboni nje ukuba amanzi aphinda asetyenziswe kwakhona asebenza njengokucoca ulwelo ukuze amanzi atshize emlonyeni wakho akunakwenzeka. Olunye uncedo olunikezelwa kukucoca amanzi kukuvumela ixesha elincinci lomphunga kunxibelelwano lomoya. Ukutshaya okude kunxibelelana nomoya, isitokhwe esinokuba siso, ke ngoko i-recycler bong ayikuniki kuphela okugudileyo kodwa ikunika ezona ndawo zinencasa.
Egqithileyo I-Tube echanekileyo yeHookah yokuTshaya iPayipi yamanzi yaManzi
Okulandelayo: Imibhobho yeglasi yamanzi iiHookahs iiRigs zeRabha zeRAB zokuphinda zisetyenziswe kwakhona
Imibhobho Iglasi Water Hookahs Oil Rigs DAB Recycler ...